News 18 Nepal || रामायण र महाभारत दुबै कालमा थिए यी ५ महापुरुष !
काठमाडौं । तपाईलाई रामायणका सबै पात्रको नाम त थाहा नै होला । तर तपाईलाई रामायणमा रहेका यी ५ पात्रहरु महाभारतमा पनि थिए भन्ने कुरा सायदै थाहा छैन होला । को-को थिए त ति ५ पात्र ? आज हामी तपाईलाई त्यसकै बारेमा जानकारी दिनेछौँ ।
रामायणका प्रमुख पात्र हनुमान महाभारतको समयमा महाबली भीमसँग पाण्डव बनवास गएको बेला मिलेका थिए । उनीहरु दुबै पवन पुत्र भएकोले दाजुभाईको रुपमा लिने गरिन्छ ।
त्यो बेला सबैभन्दा ज्ञानी कहलिएका परशुरामलाई कसले चिन्दैन र ? ति महापुरुष परशुराम नै थिए जसले २१ पटकसम्म क्षत्रियहरुलाई पृथ्वीबाट नाश गरेका थिए । रामायणमा उनको वर्णनभगवान श्रीरामले देवी सीताको स्वयंवरमा शिव धनुष तोडिसकेपछि आउने गर्दछ । त्यस्तै महाभारतमा उनको वर्णन भीष्मको गुरु रहेको र उनी भीष्मसँग एक भीषण युद्ध लडेको व्याख्या गरिन्छ । साथै परशुरामले महाभारतमा कर्णलाई पनि ज्ञान दिएका थिए ।
जाम्बवन्तको वर्णन रामायणमा श्रीरामको विशेष सहयोगीका रुपमा गरिएको छ । उनी जाम्बवन्त नै थिए जसले राम सेतु निर्माणमा प्रमुख भूमिका निभाएका थिए । त्यस्तै महाभारतमा पनि जाम्बवन्तले भगवान श्रीकृष्णसँग युद्ध गरेका थिए ।
यो कुरा सायदैलाई थाहा छ कि,रावणका शसुरा तथा मन्दोदरीका पिता मयासुर एक ठूला ज्योतिषी तथा वास्तुशास्त्रका ज्ञाता थिए । त्यस्तै ति मयासुर नै थिए जसले युधिष्ठिरका लागि सभाभवनको निर्माण गरेका थिए । उनी त्यसबेला मयसभाको नामबाट प्रसिद्ध थिए । उक्त सभामा नै वैभव देखेर दुर्योधन पाण्डवहरुसँग ईष्र्या गर्न थालेको थियो । त्यहि कारण नै महाभारतको युद्ध भएको थियो ।
५. महर्षि दुर्वासा
हिन्दूधर्मावलम्बीका महान ऋषि महर्षि दुर्वासा रामायणकालमा एक ठूला भविष्यवक्ताको नामबाट प्रसिद्ध थिए । उनले नै राजा दशरथलाई रघुवंशको राज बताएका थिए । त्यस्तै महाभारतकालमा पनि पाण्डवको निर्वासनका बेला महर्षि दुर्वासा द्रौपदीको परिक्षा लिन आएका थिए । उनले द्रौपदीको परिक्षाका लागि आफ्ना १० हजार शिष्यहरु लिएर कुटिमा पुगेका थिए ।